‘डर र शंकाबीच बेसमेन्टमा रात बित्यो’- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
‘डर र शंकाबीच बेसमेन्टमा रात बित्यो’
कोरोनालाई जितेका न्युयोर्कका नेपालीको कथा
चैत्र २३, २०७६ दिनेशजंग शाह
न्युयोर्क — न्युयोर्कका रेन्टुरेन्ट व्यवसायी जंग (जीवन) बम, ५०, को दैनिकी, न्युयोर्क सहरको ‘रफ्तार’ सँगै दौडिरहेकै थियो । ग्राहकहरुको आथित्य, कामदार एवं आवश्यक सरसामानको व्यवस्थापन र किनमेलकै भागदौड ।
यस्तै–यस्तैमा उनी व्यस्त थिए । सहरमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को ‘सन्त्रास’ विस्तारै फैलिँदै थियो । मार्च १६ अर्थात् चैत ३ मा सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै न्युयोर्क सहरका मेयरको उर्दी आयो– ‘रातको आठ बजेपछि रेन्टुरेन्ट बन्द गर्नुस् ।’ त्यसदिन रेन्टुरेन्ट बन्द गर्दै उनी घर गए । सोफामा बसेर टेलिभिजन हेर्दै थिए, शरीर तातेको अनुभव गरे ।
मनमा चिसो पस्यो– कतै केही त भएन ! शरीर नापे । ९९ दशमलव ९९ ज्वरो देखियो । ज्वरो नरोकिएपछि, बमले स्वास्थ्य पेशामा कार्यरत श्रीमतीलाई सुनाए । श्रीमतीले सम्भावित परिस्थितीको आकलन गर्दै घरको बेसमेन्टमा उनको बस्ने व्‍यवस्थापन मिलाइन्, आइसोलेसनमा ।
कैलालीका बमले शनिबार कान्तिपुरसँगको टेलिफोन संवादमा भने, ‘रातभरि पनि ज्वरो घटेन । मनमा एकखाले डर उब्जियो ।’ तीन साताअघि, त्यतिबेला सहरमा मास्क लगाउने त्यति ‘ट्रेन्ड’ थिएन, किनमेलको क्रममा कहाँकहाँ पुगियो ? को–को भेटिए ? कतै कोभिड १९ को चपेटामा त परिएन ? शंका र डरबीच बमले बेसमेन्टमा त्यो रात बिताए ।
भोलिपल्ट बिहान, नजिकैको एउटा मेडिकल केयरमा पुगे । नाकमा पाइप हालेर परक्षण गरियो । ज्वरो रोक्ने औषधि लिएर उनी फर्किए ।
एक, दुई दिन हेरौं न त भन्ने लाग्यो । तर, ज्वरोले रोकिने नामै लिएन । बरु, सुख्खा खोकी सुरु भयो । शरीर पनि दुख्न थाल्यो । ‘ज्वरो बढदै गएपछि, शरीर यसरी दुख्ने कि मानौं कसैले पिट्दैछ ।’ आफ्नो लक्षणबारे उनले थपे, ‘श्वासप्रवासको गति बढ्यो ।’ जिब्रोले स्वादको चाल नै पाउन छोड्यो । खाना पटक्कै नरुच्ने । खानातिर हेर्नसमेत मन नलाग्ने । अब यसरी बसेर भएन भन्ने लाग्यो ।
दुई दिनपछि अर्को मेडिकल सेन्टरमा परीक्षण भयो । नाकमा पाइप हालियो । एक्सरे भयो । निमोनिया पनि देखिएन । परीक्षणको रिपोर्ट आउन तीन, चार दिन लाग्ने भनियो ।
परीक्षण नेगेटिभ आयो । कोरोनाको संक्रमण देखिएन । तर, बमको स्थिति झनै प्रतिकुल बन्दै गयो । शरीरको दुखाइ सहनै गाह्रो । श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ हुनथाल्यो । परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपनि उनको मनले मानेन । मनको शंका झन् बढ्न थाल्यो, ‘कोभिड १९ ले समात्यो कि क्या हो !’ अन्ततः ज्वरो आउन थालेको नौं दिनपछि, बम, ओसन साइडमा रहेको माउण्ट साइनाई हस्पिटलमा पुगे ।
हस्पिटलमा त्यति भीडभाड त थिएन तर बेड खाली नभएकोले केही बेर पर्खिए उनले । ज्वरो र शरीर दुखाइ सहनै नसक्ने अवस्थामा थियो । बेड पाएपछि स्लाइन चढाइयो । प्रेसर नापियो । परीक्षण थालियो । नाकमा पाइप हाल्नेदेखि करीब १० सीसीमा रगत संकलन भयो । भोलिपल्ट तिजा आयो । कोभिड १९ को संक्रमण पुष्टि भयो । निमोनियासमेत सुरु भइसकेको रहेछ ।
औषधि र भिटामिन दिन थालियो । ‘विशेषत: भिटामिन सी र डीसँगै मल्टी भिटामिन, यस्तो बेला महत्वपूर्ण खुराक हुँदोरहेछ,’ उपचारको क्रममा चिकित्सकहरुले एन्टिबायोटिकसहित धेरैखाले औषधि दिएको स्मरण गर्दै बमले भने ‘मुख्यतया, मलेरिया नियन्त्रणमा प्रयोग हुने औषधि (हाइडोओक्सक्लोरोक्विन) प्रयोग गर्दा रहेछन ।’
अस्पताल बसाइको दोस्रो दिन बिस्तारै ज्वरोमा नियन्त्रण आयो । स्वाँस्वाँ र खोकीमा सुधार आयो । खान रुच्न थाल्यो । ६ दिनको बसाइपछि स्थितिमा सुधार आएपछि बमको पुनः परीक्षण गरियो । परीक्षण नेगेटिभ आयो ।
गत मंगलबार उनी डिस्चार्ज भए । दुई दशकदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका बम, अहिले घरमा आराम गर्दै छन् । बमले भने ‘बेलैमा उपचार भए, कोभिड-१९ निको हुँदो रहेछ । साथै संकटमा आत्मविश्वास बलियो पार्नु पर्दोरहेछ । आत्तिनु हुँदैन ।’ चिकित्सकले उनलाई अहिले कुनै औषधि दिएका छैनन् । भिटामिन सी र डी सेवन गर्ने, अतिरिक्त घर भित्रै हल्का हिँडने, योग गर्ने उनको दैनिकी छ ।
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ १०:१०
कर्णालीका ‘आइसोलेसन अस्पताल’ले पाएनन् बजेट, कोषमै थन्‍कियो १ करोड
चैत्र २३, २०७६ ज्योति कटुवाल, एलपी देवकोटा, हरि गौतम
सुर्खेत — कर्णालीका तीन अस्पताललाई आइसोलेसन अस्पताल बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । प्रदेश सरकारले चैत १३ गते प्रदेश अस्पतालसहित जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी अस्पताललाई आइसोलेसन अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । अस्पतालहरुले अहिलेसम्म बजेटसमेत पाएका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई १ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि उक्त रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा थन्‍किएको छ ।
प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेका अनुसार शिक्षण अस्पतालमा अहिले पनि १ सय २० शøयाको आइसोलेसन वार्ड तयारी अवस्थामा छ । ‘प्रदेश सरकारले दिएको रकम लत्ताकपडा र खाद्यान्नवाहेक अन्यमा खर्च गर्न नपाइने भएपछि आइसोलेसन सेन्टर विस्तारमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक्ता भएको शीर्षकमा रकम नआउ“दा अलमल भयो ।’
अस्पतालमा ‘वीएसएल–२’ ल्याब यसअघि नै सञ्चालनमा छ । रजिष्ट्रार काफ्लेले कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि ‘टीसीआर’ मेसिनको मात्रै अभाव भएको बताए । प्रदेश सरकारको रकमबाट अस्पतालमा भेन्टिलेटर थप गर्ने योजना प्रतिष्ठानको छ । अहिले अस्पतालमा ५ वटा भेन्टिलेटर चालु अवस्थामा छन् ।
चौरजहारी अस्पतालमा आइसोलेसन केन्द्र बनाउन भन्दै प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैया“ विनियोजन गरेको छ । तर, बजेट नआउ“दा अस्पताल व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ ।
अस्पतालले उधारोमा सामग्री मगाएर कोरोना उपचार अस्पताल निर्माण गरिसकेको छ ।
अस्पतालका प्रशासक डीलबहादुर गिरीले २ नम्बर वडाको शीतल माध्यमिक विद्यालयमा २० र अस्पतालभित्र ४ गरी २४ शøयाको आइसोलेसन वार्ड निर्माण भइसकेको बताए । उनका अनुसार झण्डै १० लाख रुपैया“को सामग्री खरिद गरिए पनि बजेट नआउ“दा समस्या भएको छ । ‘बिरामी आएपछि भर्ना गर्न सक्नेगरी तयारी पूरा गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारले रकम नपठाउ“दा थप व्यवस्थापनमा समस्या हुने देखियो ।’ जटिल अवस्थाका बिरामीलाई अस्पतालभित्रका बेड र सामान्य हि“डडुल गर्न सक्ने बिरामीलाई विद्यालयमा बनाइएको अस्पतालमा राख्ने तयारी भइरहेको गिरीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकाले भने बल्ल बैठकको तयारी गरेको छ । बैठकका लागि आइतबार कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र आइसोलेसन केन्द्रकी अध्यक्ष तोकिएकी भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी चौरजहारी पुग्दैछन् । बनेको आइसोलेसनको अवस्था अवलोकन र आवश्यक छलफल र तयारीका लागि वैठक बस्ने मन्त्री केसीले बताइन् । ‘प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेको होइन,’ उनले भनिन््, ‘वैठकको निर्णयअनुसार थप व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
सुर्खेतमा प्रक्रिया सुरु
वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश अस्पतालले आइसोलेसनका लागि चाहिने थप उपकरण खरिद गर्न लागिएको जनाएको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोगमा भेन्टिलेटर र आइसीयू बेड किन्नको लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. डम्बर खड्काले बताए । लकडाउनका कारण समयमै आवश्यक उपकरण ल्याउन समस्या भएको उनको भनाइ छ । अस्पतालले करिब ५० लाख रुपैया“को सामान खरिद गरिसकिएको जनाएको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारले अस्पतालका लागि २ करोड ६२ लाख रुपैया“ विनियोजन गरेको डा. खड्काले जानकारी दिए । अहिले प्रदेश अस्पतालमा २ भेन्टिलेटरसहित ४ शøयाको आइसीयू छ । अस्पतालले ४ भेन्टिलेटरसहित १० आइसीयू बेड थप्ने तयारी गरेको हो । यसअघि चीनबाट ल्याइएको पीपीइ सेट पूरा नहु“दा प्रयोगविहीन भएको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ । प्रदेश अस्पतालमा गरिएका २३ स्वाब परीक्षणमा सबैको रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ देखिएको डा. खड्काले जनाए ।
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ १०:०९